[APK] can nwere ike ibudata Pokémon Go wee bido ichu nta | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | APK, Egwuregwu gam akporo, Noticias, Pokémon Go
Niantic Labs na Nintendo ha emewo ka ayi tule anya nke ha iji bịaruo nso na eziokwu dịwanye elu nke otu egwuregwu na-adọrọ mmasị na-adịbeghị anya. Inwe Pokémon na-agagharị na agbata obi ka anyị wee nwee ike ịchụ nta ha bụ ahụmịhe egwuregwu zuru oke nke ọtụtụ na-eche kemgbe ozi mbụ gbasara mmalite nke beta bidoro ịbata na mba ụfọdụ. Anyị ahụla ka ụfọdụ vidio gafere na ihe oyiyi na-egosi anyị akụkụ nke egwuregwu iji nweta ezé anyị ogologo oge iji nwee ike ịnụ ụtọ onwe anyị ịga ije ịchụ nta ndị Pokémon.
N’ikpeazụ anyị nwetara ya ebe a na ọnọdụ APK na-ebido mpaghara mpaghara n'ọtụtụ mba. Ọ bụ ezie na ọ dịghị na mba anyị site na Playlọ Ahịa Google, ọ bụrụ na ibudata APK anyị nyere, ị nwere ike ịmalite ịmepụta akaụntụ gị, nyochaa mpaghara gị ma chụọ Pokémon ahụ nke ga-esi n'akụkụ ọ bụla ị na-aga iji ekwentị gị nyochaa. A egwuregwu egwuregwu dum meghere anyị site na eziokwu dịwanye elu nke Pokémon Go nke a na-etinye dị ka otu n'ime egwuregwu kachasị egwu nke afọ a na, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, otu kachasị mma. Ugbu a ị nwekwara ike ịchọ maka gyms ndị ahụ ịlụ ọgụ maka ha megide ndị egwuregwu ndị ọzọ.
1 Niantic Labs, Nintendo na Pokémon
Niantic Labs, Nintendo na Pokémon
Niantic Labs emeela ka anyị gaa egwuregwu nke na-ewe ihe bụ isi nke Ingress, nke mbụ o mere ka ọ bụrụ eziokwu bụ nke ọ na-etinye anyị n'ihu ọgụ maka oghere dị iche iche megide ndị egwuregwu ndị ọzọ, nke ahụ ga-anwa agha zuru ụwa ọnụ maka inweta ihe a na-akpọ «Gyms» ma ọ bụ «Gyms». Ewezuga ihe ọ bụ ichu nta Pokémon iji nwee nnukwu akwụkwọ akụkọ n'okpuru eriri anyị iji nwekwuo ike ha, anyị ga-achọ ndị Gyms ahụ ka ha lụọrọ ha ọgụ megide ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Pokémon GO bụ egwuregwu vidiyo na-abawanye ụba nke ga-anwa hapụ ụlọ gị inyocha n'obodo gị, agbata obi gị ma ọ bụ obodo gị ịchọta Pokémons iji chụọ ha. Nke a bụ ebe otu n'ime ahụmịhe kachasị mma n'ịgba egwu na-abata, ebe ị ga-ebupụta igwefoto iji lekwasị anya ebe Pokémon dị ma ọ bụ ọtụtụ nwere ike ịpụta n'oge niile. Na Pokeball ị ga-enwe ike ichu nta ha iji tinye ha na gị repertoire.
Na agha ahụ maka mgbatị ị ga-emerịrị sonye na otu ndi otu uwa ato, na nke a ga-adabere na ma ị nwere ike ihu otu ma ọ bụ egwuregwu ndị ọzọ. N’ụzọ ezi uche dị na ya, ka egwuregwu vidio na-agbasa, ọtụtụ ndị egwuregwu ga-esonye ya ma bụrụ ihe ọchị maka mmadụ niile. Nke a dị mkpa, ebe ọgụ maka mgbatị ndị a ga-atụ aro na enwere ike ịme obodo niile nke ndị egwuregwu ga-achọ nkata ha na oghere dị iche iche iji mepụta atụmatụ.
Oge ịmalitere ngwa ị ga-enwe ike banye na akaụntụ Google gị iji mee ka ihe dị ngwa. Mgbe nke a gasịrị, ị ga-ahụ nnabata na ohere ịhọrọ okike maka dike gị. Nwere ike ịhazi ntutu ya, agba anya ya na agba uwe ya iji nye ya ihe pụrụ iche, ọ bụ ezie na eziokwu enweghị ọtụtụ nhọrọ. Echere m na ka mmelite ahụ na-aga n'ihu, a ga-enwe nhọrọ ndị ọzọ iji yie dike anyị.
Mepụta akaụntụ na agwa, anyị nwere ike ịgbalite GPS ma bido na ichọ Pokémon. A ga-eweghachi ezigbo map nke mpaghara gị na ihuenyo ahụ, yabụ ị ga-enweta ọnọdụ ngwa ngwa iji hụ otú Pokémon si apụta na-achọ. Oge ị hụrụ otu, pịa ya na igwefoto ngwa ga-oru na nke ị ga-elekwasị anya nke mere na ọ na-egosi na etiti nke ihuenyo na ị nwere ike ẹkedori otu n'ime ndị Pokeballs na a swipe.
Ozugbo a chọburu Pokémon mbụ, aha ya ga - egosi na ị nwere ike ịgbanwe dịka ịchọrọ, klas gị, ibu, ogo ya, na oke stardust na canb bulụl. Can nwere ike ịzụ ya ma mee ka ọ gbanwee. Huntchụ nta izizi gị adịla njikere, egwuregwu ahụ ga - agba gị ume ịga ije iji gaa mgbama ndị ahụ na - acha anụnụ anụnụ ị ga - ahụ n’akụkụ mpaghara gị ugbu a naanị ị ga - achọ ebe mgbatị dị n’ogbe gị wee lụọrọ ha ọgụ!
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe otu pokemon na-eduzi eji aghụghọ na ihe nzuzo niile nke egwuregwu ahụ, echefula ịbanye njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Minimumdị nke kachasị nta iji nwee ike ịkpọ ya bụ gam akporo 4.4. E nwere ụfọdụ ọnụ na-adabaghị ma: Xperia Z1, Moto E2
Budata ngwa nke Pokémon Go
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » [APK] Download Pokémon Gaa ugbu a ma kwadebe ịchụ nta na ịlụ ọgụ maka agbata obi gị
Enwere ike ibudata ya na gam akporo 4.4.2 na Spain?
Zaghachi Dotty Hijacker
Maka gam akporo 4.4 ma ọ bụ karịa, ee!
D4 ewu dijo
Mgbe m gbalịrị ibudata ya na-ekwu na ọ bụ dakọtara inwe gam akporo 5.0.1, enwere m motoe / 2 ọgbọ sitere na 2015
E nwere ụfọdụ ọnụ na-anaghị akwado ma. M tinye nke gị na ndepụta. Z1 bụkwa onye ọzọ enweghị ike igwu egwu na oge a.
Kedu ihe kpatara na akwadoghị z1? Ọ nwere ike ịbụ mmelite maka egwuregwu ahụ? M nwere Ingress na ọ rụrụ ọrụ dị ukwuu maka m 🙁
Ezigbo Vanessa, ya mere agụgoro m na nnọkọ. Agbanyeghị, ana m agba gị ume ịnwale APK ma anyị kwenye ya. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ maka gị, echeghị m na ọ ga-ewe oge iji melite. Daalụ!
Ndewo, nbanye na google ga-enyere anyị aka ịchekwa egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na iwepu ya ma ọ bụ gbanwee na ngwaọrụ ọzọ? Echiche kacha mma
Berny 82 dijo
Enwere m Z1 na enwere m ike ịwụnye ya, budata APK, ma nyefee ya na cell ma wụnye ya site na ebe ahụ, mana ọ naghị ebu ọdịnaya nke maapụ ahụ, ị ​​gosiri m, m na-eje ije ma na-aga, mana ebe ahụ abụghị Pokémon ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime nzukọ nzukọ m kwesịrị. egbula oge chere ya ka ọ pụta na Google play.
Ọ na-agwa m na mmewere a adabaghị na obodo m
Ndewo Ọma N'abalị M MOTOE2 ga-enwe ike igwu egwu POKEMON Gaa, ma ọ bụ G APN AP Ka PL GA-EBU,
Jose Antonio Alvarez Montes oyiyi mbiet dijo
Achọrọ m ịma ma motoe2 m nwere ike ịkpọ pokemon go ma ọ bụ ngwa a ga-ebudata. N'ihi na n'ime ndepụta ahụ ọ pụtara na motoe2 dị, mana m na-anwale ma ọ nweghị ike.
Zaghachi Jose Antonio Alvarez Montes
Enwere m SamsungXXXXXXXXXXXXX nke 4 na ọ na-arapara na ihe oyiyi mbụ, amaghị m ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka, m ga - enwe ekele
Ngwa 3 kachasị mma iji lelee ma jikwaa nchekwa nke ekwentị gị